50,000 ton organic fatịlaịza procution line - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Iji zụlite ọrụ ubi na-acha akwụkwọ ndụ, anyị ga-ebu ụzọ dozie nsogbu nke mmetọ ala. Nsogbu ndị a na-enwekarị na ala bụ: nchịkọta ala, ahaghị nhata nke nri nri na-edozi ahụ, ọdịnaya dị ala dị ala, ịkọ ala na-emighị emi, ala acidification, salinization nke ala, mmetọ ala, wdg. ala kwesịrị ka mma. Mee ka ihe dị n'ime ala dịkwuo mma nke ala, nke mere na e nwere ọtụtụ pellets na obere ihe ndị na-emerụ ahụ n'ala.
Anyị na-enye usoro nhazi na imepụta usoro ihe eji emepụta fatịlaịza zuru ezu. Enwere ike iji fatịlaịza nke ahịhịa metro, ihe mkpofu ugbo, anụ ụlọ na anụ ọkụkọ na mkpofu obodo. Ekwesiri ka emeghari ahihia ahihia ndia tupu emegharia ya na nri ndi ahia nke ahia. Ntinye ego nke ịtụgharị ihe mkpoba n'ime akụ bara uru.
A na-eji usoro fatịlaịza ọhụrụ nke nwere tọn 50,000 kwa afọ na-emepụta fatịlaịza na mkpofu ugbo, anụ ụlọ na anụ ọkụkọ, sludge na mkpofu ahịhịa dị ka akụrụngwa akụrụngwa. Usoro mmepụta ihe niile nwere ike ọ bụghị naanị ịtụgharị mkpofu ahịhịa dị iche iche na fatịlaịza organic, kamakwa weta nnukwu uru gburugburu na akụ na ụba.
Organic fatịlaịza mmepụta akara akụrụngwa tumadi na-agụnye a hopper na feeder, drum granulator, draya, ala sieve igwe, ịwụ ndoli, belt ebu, nkwakọ igwe na ndị ọzọ inyeaka akụrụngwa.
Akụrụngwa eji eme ihe
Enwere ike itinye ahịhịa fatịlaịza ọhụrụ n'ọrụ na ihe dị iche iche dị na mmanụ, ọkachasị ahịhịa ọka, mmanya fọdụrụ, nje fọdụrụ, mmanụ fọdụrụ, anụ ụlọ na anụ ọkụkọ na ihe ndị ọzọ anaghị adị mfe ịkwanye. Enwere ike iji ya maka ọgwụgwọ humic acid na sludge nsị.
Ihe ndị a bụ ọkwa nke akụrụngwa na ahịhịa na-emepụta fatịlaịza:
1. Ihe mkpofu ugbo: ahihia, ahihia agwa, slag owu, osikapa wdg.
2. Anụmanụ anụmanụ: ngwakọta nsị anụ ọkụkọ na nsị anụmanụ, dịka ebe a na-egbu anụ, mkpofu n’ahịa azụ, ehi, ézì, atụrụ, ọkụkọ, ọbọgwụ, ọgazị, mamịrị ewu na nsị.
3. Ulo oru ulo oru: ahihia ahihia, ahihia mmanya, ahihia azu, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, wdg.
4. Nkpuru ulo: nri nri, mgbọrọgwụ na akwụkwọ nri, wdg.
5. Sludge: mmiri nke si na osimiri, mmiri mmiri, wdg.
Ngwurugwu nke fatịlaịza na-emepụta ihe na-emepụta ihe, onye na-agwakọta ihe, onye na-egwu oyi, granulator, draya, igwe nju oyi, igwe nkwakọ ngwaahịa, wdg.
Ọhụrụ organic fatịlaịza mmepụta akara nwere àgwà nke anụ arụmọrụ, elu arụmọrụ, adaba mmezi na ogologo ọrụ ndụ.
1. varietydị a abụghị naanị ihe kwesịrị ekwesị maka fatịlaịza organic, kamakwa maka fatịlaịza na-edozi ahụ nke na-agbakwunye nje na-arụ ọrụ.
2. dayameta nke fatịlaịza nwere ike gbanwee dị ka mkpa nke ndị ahịa. All iche iche nke fatịlaịza granulators emepụta anyị factory gụnyere: ọhụrụ organic fatịlaịza granulators, disk granulators, ewepụghị ebu granulators, drum granulators, wdg Họrọ dị iche iche granulators na-emepụta ahụ nke dị iche iche shapes.
3. Jụrụ ọtụtụ ebe. Ọ nwere ike ịgwọ akụrụngwa dị iche iche, dịka mkpofu anụmanụ, mkpofu ahịhịa, nsị gbaa ụka, wdg. Enwere ike ịhazi ihe ndị a niile na fatịlaịza organic fatịlaịza.
4. Nnukwu akpaaka na oke ziri ezi. Igwe ihe eji eme ihe na igwe ihe eji eme ihe na-ejikwa kọmputa na akpaghị aka.
5. Elu àgwà, arụmọrụ arụmọrụ, adaba ọrụ, elu akpaaka ogo na ogologo ọrụ ndụ. Anyị na-ewere akaụntụ zuru ezu banyere ahụmịhe onye ọrụ mgbe ị na-emepụta ma na-arụpụta igwe fatịlaịza.
Ọrụ ndị agbakwunyere bara uru:
1. Anyị factory nwere ike inyere inye n'ezie ntọala akara atụmatụ mgbe ahịa akụrụngwa iwu na-akwadoro.
2. Thelọ ọrụ ahụ gbasoro ụkpụrụ dị mkpa dị mkpa.
3. Nwale dịka ụkpụrụ dị mkpa nke ule akụrụngwa si dị.
4. Nnyocha nyocha siri ike tupu ngwaahịa ahụ ahapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Anụ ụlọ anụ ahịhịa na anụ ọkụkọ na ngwaahịa ndị ọzọ ejirila banye ebe gbaa ụka. Mgbe otu gbaa ụka na nke abụọ ịka nká na stacking, ndị isi nke anụ ụlọ na ulo ozuzu okuko nri na-ekpochapụ. Enwere ike ịgbakwunye nje fermented n'oge a iji mebie eriri dị na ya nke mere nha nha nke nchipịa nwere ike imeju ihe granularity chọrọ nke imepụta granulation. A ghaghị ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ nke akụrụngwa n'oge gbaa ụka iji gbochie oke okpomọkụ ma gbochie ọrụ nke microorganisms na enzymes. A na-ejikarị igwe eji agagharị na igwe na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri na-emegharị, na-agwakọta ma na-eme ngwa ngwa gbaa ụka.
2. Fatịlaịza Emebi
The fermented ihe ndinuak usoro na completes nke abụọ ịka nká na stacking usoro nwere ike iji ndị ahịa na-ahọrọ a ọkara mmiri ihe crusher, nke adapts ka mmiri ọdịnaya nke ngwaọrụ na a dịgasị iche iche.
Mgbe ị gwepịara ihe ahụ, tinye ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ ma ọ bụ ihe inyeaka dị ka usoro ahụ si dị, ma jiri igwe kwụ ọtọ ma ọ bụ vetikal n'oge usoro ịkwanye iji kpalite akụrụngwa na mgbakwunye.
Tupu granulation, ma ọ bụrụ na mmiri nke akụrụngwa karịa 25%, na ụfọdụ iru mmiri na urughuru size, mmiri kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 25% ma ọ bụrụ na eji draya draya iji ihicha.
A na-eji igwe akuku granule ohuru eji eme ihe n'ime granụ iji kwado ọrụ microbial. Dị ndụ microorganisms na-eji granulator karịrị 90%.
Mmiri mmiri nke granulation dị ihe dịka 15% ruo 20%, nke n'ozuzu karịa ebumnuche. Ọ chọrọ igwe ihicha iji kwado njem na nchekwa nke fatịlaịza.
7. Na-ajụ oyi
Ngwaahịa a na-asacha na-abanye na ngwa nju oyi site na eriri ebu belt. Ihe nju oyi na-anabata ngwaahịa ikuku jụrụ oyi nke ikuku iji kpochapụ ikpo ọkụ fọdụrụnụ, ma na-ebelata ọdịnaya mmiri nke ahụ.
Anyị na-enye a elu-edu na elu-arụmọrụ drum sieving igwe iji nweta nhazi ọkwa nke recycled ihe na okokụre ngwaahịa. A na-eweghachi ihe a na-emegharị emegharị na ihe ndọtị maka nhazi ọzọ, ma nyefee ngwaahịa ahụ agwụla na igwe mkpuchi fatịlaịza ma ọ bụ ozugbo na igwe akụrụngwa akpaka.
9. Nkwakọ ngwaahịa
Ngwa a rụchara abanye na igwe nkwakọ ngwaahịa site na eriri ebu. Mepụta nkwakọ ngwaahịa na akpaka nkwakọ ngwaahịa. Igwe nkwakọ ngwaahịa nwere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ na oke ziri ezi. A na-ejikọ ya na igwe na-ebugharị ya na mpempe akwụkwọ na-ebuli elu. Otu igwe bụ vasatail na oru oma. Kpoo ihe nkwakọ ngwaahịa a ma jiri gburugburu maka ngwongwo dị iche iche.